» Natiijada doorashooyinka dalka Chana oo lagu dhawaaqay.
Natiijada doorashooyinka dalka Chana oo lagu dhawaaqay.
Dec 10, 2012 - jawaab	Doorashooyinkii dalka Chana ka socday maalmahaan ayaa ugu dambeyn lagu dhaawaqay natiijada kasoo baxday doorashooyinkaasi,waxaana ku guuleystay John Mahama madaxweynaha talada dalkaasi.
Gudiga doorashooyinka ayaa sheegay in Mr Mahama uu helay codad gaaraya 50.7% halka Nana Akufo Addo oo la tartamayay Mahama uu helay 47.7%,waxaana sidaasi ku dhawaaqay masuul u hadlay gudiga doorashooyinka.
Hogaamiyaha Xisbiga mucaaradka ee NPP Nana Addo ayaanan ku qancin doorashada iyo sidii u dhacday waxaana uu sheegay in gudiga doorashooyinka ay sameeyeen wax isdaba marin maalintii Jimcaha aheyd.
Madaxweynaha dib loosoo doortay ee Mahama ayaa yiri “dhamaan hogaamiyaasha siyaasada waa inay ku qancaan ayna xusmeeyaan codka shacabka Chana”.
Booliska dalka Chana ayaa lasoo dhigay caasimada dalkaasi ee Accra iyagoo isticmaalaya suntan dadka ka ilmeysiisa waxaana ay u isticmaalayeen banaanbaxayaasha mucaaradka kuwaasi hortubnaa banaanka xafiisyada gudiga doorashooyinka dalkaasi.
Taankiyo waaweyn ayaa sidoo kale lasoo dhigay xarumaha gudiga doorashooyinka iyo wadooyinka ku hareeraysay taasi oo sababtay inay wada ay xiraan booliska.
“Mudanayaal iyo marwooyin sidaasn idiin sheegnay natiijadii doorashada waxaan cadeynaynaa in John Dramani Mahama uu yahay madaxweynaha dalka Chana”sidaasi waxaa yiri madaxa gudiga doorashooyinka dalkaaso Kwadwo Afari-Gyan oo la hadlay saxaafada dalkaasi.
Wadanka Chana waa wadanka kaliya ee dunida sida ugu dhaqsiyaha badan dhaqaalihiisa uu kusoo kobcay,waana wadanka kaliya ee ugu degen marka loo eego wadamada Dimoqraadiga ku dhaqma.
« Warbixinta Ka HoreysayDeg deg :- Qarax miino oo ka dhacay Muqdisho	Warbixinta Xigto »Jaamacada Carabta oo isku raacday in la gargaaro dadka falastiiniyiinta.	Leave a Reply Cancel reply